Waa goorma Ramadaan? | Berberanews.com
Home WARARKA Waa goorma Ramadaan?
Waa goorma Ramadaan?
Maalinta koowaad ee soonka bisha barakaysan ee Ramadaan, oo lagu go’aamiyo aragtida bisha cusub, waxay u badan tahay inay noqoto salaasada April 13. In lagu dhawaaqo bilashada bisha Ramadaan, Sacuudi Carabiya iyo waddamada kale ee u badan Muslimiinta waxay ku tiirsan yihiin markhaatiyaal arka curashada bisha.
Baxrayn, Masar, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa dhammaantood la filayaa inay raacaan aragtida Sacuudiga ee bisha cusub.
Wadamada kale waxay leeyihiin araga madax banaan, laakiin Indonesia, Lubnan, Maroko iyo Syria sidoo kale waxay u badan tahay inay bilaabaan soonka laga bilaabo salaasada halka wadamada sii fog ee bariga iyo galbeedka ay bilaabi doonaan marka la arko bisha.
Aqalka Kalandarka ee Qatar (QCH) ayaa ku dhawaaqay in bisha cusub ee Ramadaan ay dhalaneyso 12-ka April saacaddu markay tahay 02:31 GMT, sida ay sheegeen aqoonyahanada cilmiga xiddigiska.
Maalintaas, ayaa laga yaabaa in dayaxu ka muuqdo qaybo ka mid ah Waqooyiga, Badhtamaha iyo Koonfurta America. 13-ka April, dayaxa ayaa si fudud looga arki doonaa adduunka intiisa badan.
Muuqaalka dhabta ah ee bisha cusub wuxuu ku xidhnaan doontaa arrimo sida xaaladaha cimilada, daruuraha iyo masaafada u dhexeysa qorraxda iyo dayaxa.
Bisha dayaxu wuxu soconaya 29 ilaa 30 maalmood, waxayna ku xidhantahay aragtida bisha cusub habeenka 29aad ee bil kasta. Haddii bisha cusub la arki waayo, bishu waxay socotaa 30 maalmood.
Maxay bisha Ramadan u barakaysantahay?
Dadka muslimiinta ah, Ramadaan waa bishii ay aayadaha ugu horeeya ee Quraanka kariimka ah, kitaabka islaamka ee barakaysan, ay ku soo degeen Nebi Muxamed in ka badan 1,400 sano ka hor.
Bisha oo dhan, muslimiinta waxay soomanyihiin kahor qorrax soo baxa, ama Fajr, salaada ilaa qorrax dhaca, Maghrib. Soonka wuxuu ka kooban yahay ka fogaanshaha cunida, cabitaanka, qiijinta sigaarka iyo wixii la mida iyo xidhiidhka galmada si loo gaadho “taqwa” dembi dhaafka Eebbe.
Soonka waa mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka, oo ay weheliyaan Iimaanka iyo towxiidka , salaadaha maalinlaha ah, sadaqada, iyo gudashada xajka ee Makkaa haddii jidh ahaan iyo dhaqaale ahaanba karti u leedahay.
Sannadkii hore, saacadaha soonka adduunka oo dhan waxay u dhexeeyeen 10 illaa 20 saacadood maalintii.
Suxufi Maxamed Siciid Cabdillaahi (Xarrago).
Berberanews Chief in editor.
Previous articleMasar oo digniin dagaal oo kama danbaysa u dirtay Eithiopia QAAHIRA-(Berberanews)-Kulanka ugu dambeeya ee u dhaxeeya Masar, Sudan iyo Ethiopia ee biyo muranka xidheenka ay Ethiopia ka sameyneyso webiga Nile waa fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaadhi karo ka hor inta aanay Ethiopia dib u billaabin buuxinta biyo-xidheenka, waxaa sidaas bayaan ay soo saartay Axaddii ku sheegtay Masar. Kulanka ayaa Isniintii maanta kusoo geba-geboobaya magaalada Kinshasa. “Wada-xaajoodyadan waxay ka dhigan yihiin fursaddii ugu dambeysay ee ay tahay in saddexda dal ay ka faa’iideystaan si ay heshiis u gaadhaan….kahor xilliga daadadka,” ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Masar. Toddbaadkii tegay, madaxweynaha Masar, Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay inay jiri doonto “xasillooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka,” haddii biyaha Masar ay hesho uu saameeyo biyo-xidheenka. “Ma jirto cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta Masar, cid kasta oo dooneysa inay isku daydana, ha isku daydo,” ayuu yidhi. “Cidna ma qiyaaseyso inay ka fog tahay awoodaheena,” ayuu yidhi Sissi. Sudan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo dhanka xuduudda ah ay ka dhaxeysaa Ethiopia, taasi oo salka ku haysa dhul beereedka gobolka al-Fashaqa, waxaana Sabtidii ay dhoola-tus militari la sameysya Masar. Hadalka cusub ee Masar kasoo baxay, iyo kuwii uu toddobaadkii tegay jeediyey madaxweyne al-Sissi, ayaa cabsi dagaal gelinaya gobolka, waxaana taxliiliyayaasha siyaasadda ay rumeysan yihiin in haddii wada-hadallada Kinshasa ay guul-darreystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka.
Next articleSucuudiga oo shuruudo ku xidhay cumrada Bisha Ramadan